Privy: သုံးစွဲရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ ၀ ယ်ယူသူများအတွက်အစွမ်းထက်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများ | Martech Zone
Privy: သုံးစွဲရန်လွယ်ကူခြင်း၊ On-site Customer ဝယ်ယူမှုအတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်များ
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 25, 2019 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 23, 2020 Douglas Karr
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ် ဦး အပေါ်ဖြစ်ပါတယ် Squarespaceအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးအပါအ ၀ င်အခြေခံများအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။ Self-service client များအတွက်၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာများစွာပါ ၀ င်သောအလွန်ကောင်းသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ WordPress ကို၎င်း၏အကန့်အသတ်မရှိစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကြောင့် hosted မကြာခဏအကြံပြုပါသည်။ သို့သော်အချို့ Squarespace အတွက်မူခိုင်မာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Squarespace အတွက်ကင်းမဲ့နေစဉ် API ကို နှင့်သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းသန်းပေါင်းများစွာထုတ်ကုန်ပေါင်းစည်းမှု, သင်ဆဲသင့်ရဲ့ site ကိုတိုးမြှင့်ဖို့အချို့သောစိတ်ကူး tools တွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများအားသူ၏သတင်းလွှာကိုရယူရန်တိုက်တွန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ရှိသည်။ ကျနော်တို့အစိုင်အခဲဖြေရှင်းချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ရာဝတီ.
ဒီဇိုင်းဆွဲဆွဲချပါ - popups၊ နဖူးစည်းစာတန်းများ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ flyouts၊ embedded ပုံစံများ၊ ဆင်းသက်နိုင်သောစာမျက်နှာများ၊ သင်၏တည်နေရာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောပြောင်းလဲခြင်းအတွေ့အကြုံများကိုသင်အလွယ်တကူဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်လူမှုရေးသို့မဟုတ်လခပေးသောဖြန့်ဝေမှုအတွက် hosted landing page ကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
ပစ်မှတ်ထား - ထွက်ခွာရန်ရည်ရွယ်ချက်၊ ပထဝီအနေအထား၊ လှည်းတန်ဖိုး၊ ရည်ညွှန်းလမ်းကြောင်း၊ ကိရိယာအမျိုးအစားနှင့်အခြားအရာများအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
ကူပွန်ကုဒ်များ - opt-in ပြီးနောက်တစ်ခုတည်းသောအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အမြောက်အများကူပွန်ကုဒ်များကိုပြုပြင်ပြီးထုတ်ဖေါ်ပါ။ သင်၏အုတ်နှင့်မော်တာစတိုးဆိုင်သို့သွားစဉ်သုံးစွဲသူများကိုသူတို့၏ဖုန်းများမှကမ်းလှမ်းချက်များကိုရွေးရန်တောင်မှခွင့်ပြုပါ။
Integrated - အဆက်အသွယ်အသစ်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်၊ CRM၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းသို့တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။ စိတ်ကြိုက်နယ်ပယ်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Privy စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုသင်၏လက်ရှိလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်နက်ရှိုင်းစွာပေါင်းစပ်ပါ။
ပေါင်းစည်းခြင်းတွင် Shopify၊ Squarespace၊ Magento၊ ecwid၊ Bigcommerce, Weebly, WordPress တို့ပါဝင်သည်။ HubSpot, Tumblr, Joomla, ဇင်လှည်း, စိတ်အားထက်သန်သော, 3dart, အာကာသယာဉ်, Mailchimp, ConstantContact, Mailerlite, မင်းသမီး Emma, ​​Infusionsoft, ယို, ConvertKit, GetResponse, နေပြည်တော်, ActiveCampaignBizzy၊ Klaviyo၊ ယို၊ Bizzy၊ Mailup၊ Ininbox၊ Mad Mimi၊ Dotmailer၊ Feedblitz၊ Freshmail, Remarkety, Fishbowl, iLoyal, Slack and Adroll တို့ပါဝင်သည်။
သင်၏ပထမဆုံး Privy Campaign ကိုမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်မည်နည်း
ဤတွင်လေးမိနစ်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Privy သည်သင်၏ပထမဆုံးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခြေခံအဆင့်များဖြင့်သင့်အားစကားပြောသည်။
နှင့် ပုဂ္ဂလိကစျေးနှုန်း သငျသညျတစျခုစျေးနှုန်းများအတွက် On-site ကို display ကိုအင်္ဂါရပ်များ, ပေါင်းစည်းမှုနှင့် display ကိုအမျိုးအစားမှဝင်ရောက်ခွင့်ရ! Privy သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးသောပြောင်းလဲခြင်းနည်းလမ်းကိုရရန်အတွက်မည်သည့်ဘတ်ဂျက်တွင်မဆိုကုန်သည်အားလုံးအတွက်လယ်ကွက်ကိုမျှဝေပေးခဲ့သည်။
သင်အမှန်တကယ်ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုလိုသည်မှာ On-site ပစ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လှည်းချွေတာခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၊ upsell စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ၊ လှည့်လည်ရန်အနိုင်ရရှိသောလှုပ်ရှားမှုများ၊ ထူးခြားသောကူပွန်ကုဒ်နံပါတ်များ၊ HTML embedding၊ design element, A / B စမ်းသပ်ခြင်း၊ ကျန်တဲ့သင့်ရဲ့ tech stack ၏ဆက်သွယ်မှု box ကို။ "
Tags: 3dcartActiveCampaignကြော်ငြာတင်သြဘာအခြေခံစံနှုန်းBigCommerceဇော်ပိုင်ကမ်ပိန်းConstantContactConvertKitctaCustomer.ioမြစ်ကြီးနားdotmailer ဖြစ်သည်အစက်တစက်ကျစိတ်အားထက်သန်Ecwidအမ်မာထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက်Feedblitzငါးမန်းနင်GetResponsehubspot ဖြစ်သည်သစ္စာရှိသူInfusionsoftဝင်စာjoomlaKlaviyoဆင်းသက်စာမျက်နှာများအရူး Mimimagentomailchimpမင်္ဂလာပါမေးလ်စာပို့ပေါ်လာသည်မင်္ဂလာပါမှတ်ချက်လေးနေပြည်တော်shopifyပျင်းရိအသံအကျဆုံးအာကာသယဉ်SquarespaceTumblrမင်္ဂလာပါWordPressဇင်လှည်း